Blackpink အဖွဲ့ဝင် Lisa ​ဝတ်ဆင်သည့် နာမည်ကျော် Celine brand မှ တန်ဖိုးကြီးဝတ်စုံများ | News Bar Myanmar
Blackpink အဖွဲ့ဝင် Lisa ​ဝတ်ဆင်သည့် နာမည်ကျော် Celine brand မှ တန်ဖိုးကြီးဝတ်စုံများ
Blackpink အဖွဲ့ဝင် Jennie ဟာ Chanel ​၏ brand ambassador ဖြစ်သည့်ဟုဆိုလျှင် Lisa ကတော့ Celine brand ကိုတာဝန်ယူထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက Lisa ဟာ Celine brand မှ ဝတ်စုံများကို ပွဲအတော်များများတွင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
Celine မှဝတ်စုံများကို Lisa ဝတ်ဆင်လိုက်လျှင် အဆိုပါbrand​၏ ပင်တိုင်မော်ဒယ်များထက်ပင် ပို၍ကြည့်ကောင်းသည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ သူမဝတ်ဆင်ထားသည့် Celine မှဝတ်စုံများနှင့် အဆိုပါဝတ်စုံ​၏ စျေးနှုန်းတန်ဖိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. ခေါင်းမှ ခြေအဆုံး Celine မှ ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်၍ ၂၀၁၉ခုနှစ် Paris Men’s Fashion Week သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ Jacket နှင့် Boots ကိုတော့ Celine​၏ winter collection မှဖြစ်ပြီး သူမ​၏ဂျင်းဘောင်းဘီကတော့ $820 တန်ဖိုးရှိပါတယ်။သူမလွယ်ထားသည့် အိတ်ဆိုရင်ဖြင့် $3450 (မြန်မာငွေ ၄၈သိန်းခန့်)တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
2. သူမ​၏ လေဆိပ်ဖက်ရှင်အဖြစ် ဝတ်ဆင်ထား သည့် Celine မှထုတ်ထားသည့် Coat ဟာဆိုရင်ဖြင့် $3700 (မြန်မာငွေ ၅၁သိန်းခန့်) တန်ကြေးရှိပါတယ်။ လက်ဆွဲအိတ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် $2700 တန်ကြေးရှိပြီး ဝတ်ဆင်ထားသည့် sneakers ဟာဆိုရင်ဖြင့် $590 တန်ပါတယ်။
3. Youth With You အစီအစဉ်တွင် mentor (ဆရာ)အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သော Lisa ဟာဆိုရင်ဖြင့် ကျောင်းသူတစ်ဦး​၏ပုံစံမျိုးဖြင့် ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူအ​၏အပေါ်ထပ်ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဝတ်စုံများဟာဖြင့် $3750 တန်ကြေးရှိပါတယ်။
4.Golden Disa Awards ကိုလည်း Lisa က Celineမှ အနက်ရောင်နှင့် အဖြူရောင်စပ်ထားသည့် ဂါဝန်ကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Celine မှထုတ်ထားသည့် လည်ဆွဲကို ဆွဲထားပါတယ်။
5.အဆိုပါပုံကတော့ သူမ Paris သို့သွားစဉ် အခါတုန်းကဝတ်ဆင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lisa ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဂါဝန်ဟာဆိုရင် $2750 တန်ပြီး shoes ဟာဆိုရင်ဖြင့် $590 တန်ကြေးရှိပါတယ်။
Lisa ဟာ Celine အပြင် အခြားတန်ဖိုးကြီး Brand မှ ဝတ်စုံများကိုလည်း ဝတ်ဆင်ပါတယ်။ ဘယ် Brand ဘယ်ဝတ်စုံမဆို သူမကိုယ်ပေါ်ရောက်လျှင် အလွန် လိုက်ဖက်နေတာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တွင်လည်း Lisa နှင့် ပက်သက်သည့် သတင်းများကို Lisa ပရိတ်သတ်များအတွက် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါဦးမည်။ အစဉ်ကြိုးစားလျက်…။
Next Hanbok (ကိုရီးယားရိုးရာဝတ်စုံ) နှင့်လိုက်ဖက်လှသော မင်းသမီးများ (အပိုင်း ၂) »
Previous « ကလေးမိခင်တွေဖြစ်နေကြပေမယ့် အခုထိနုပျိုလှပနေကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီး (၇) ဦး